Dhamma talk Video by Dr. Nandamala Bhivamsa ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဟောကြားတော်မူသော ဗီဒီယို တရားတော်များ <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ ဒိုးပင်တောင်၊ (မန္တလေးမှ ၃၃။၂ မိုင်တိုင်)
သာသနာပြုဋ္ဌာန ဓမ္မပညာသင်ကြားရေး ဓမ္မပါမောက္ခ
ရန်ကုန်မြို့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်
စစ်ကိုင်းမြို့၊ မုံရွာမြို့၊ သံလျှင်မြို့၊ မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်းတိုက်များ၏ ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာတော်
I. Facebook ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဓမ္မသဘင် LIVE မှ ပြန်လည် တင်ပြသော တရားတော်များ
II. ဆရာတော်ကြီး၏ ဓမ္မသင်တန်းများ
အောက်ပါ တရားတော်များသည် ဆရာတော်ကြီးမှ အလင်းတန်းတရားခွေ ဖြန့်ချီရေး၏ အကူအညီဖြင့်
၂၀၁၈ နှစ် တရားတော်များ
၁-၁၁-၂၀၁၈ ကံ၊ ကိလေသာ၊ ဘဝသံသရာ တရားတော် (စင်္ကာပူနိုင်ငံ)
၀၀၂။ မွေးနေ့ကုသိုလ်အနုမောဒနာ ၇-၁၂-၂၀၀၉
၀၀၃။ စုဆောင်းခြင်းနှစ်ရပ် ၃၀-၁၀-၂၀၀၉
၀၀၅။ စွန့်လွတ်ခြင်းနှင့် ရယူခြင်း
၀၀၁။ ၅-၄-၂၀၁၀ လူတိုင်းကျင့်ရန်သတိပဋ္ဌာန်
၀၀၂။ ၁၉-၂-၂၀၀၉ အဘိဓမ္မာ နှင့် ဝိပဿနာ (ပဲခူး)
၀၀၃။ ၁၄-၁၂-၂၀၀၉ လူတိုင်းအတွက် ဝိပဿနာ
၀၀၄။ ၃-၄-၂၀၁၀ အရှင်အာနန္ဒာ၏ ဝိပဿနာ
၀၀၅။ ၄-၄-၂၀၁၀ သမထပုဗ္ဗင်္ဂမ ဝိပဿနာ
၀၀၁။ ၃၀-၁၁-၂၀၀၉ တရားထူးရနိုင်သူ
၀၀၂။ ၁၇-၁၂-၂၀၀၉ တရားကျင့်သူ
၀၀၃။ ၁၅-၂-၂၀၁၀ ကမ္မ ဋ္ဌာန်းအလုပ်နှင့်အိပ်ငိုက်ခြင်း
၀၀၄။ ၂၁-၂-၂၀၁၀ တရားသိလျှက် အကျင့်ခက်
၀၀၁။ အ၀ိဇ္ဇာနှင့် ဝိဇ္ဇာ
၀၀၃။ ဓမ္မမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ - ၁
၀၀၄။ ဓမ္မမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ-၂
၀၀၅။ ဓမ္မမေးခွန်းနှင့် အဖြေများ -၃
၀၀၁။ ဘဝအသွင်ကို ဓမ္မအမြင်ဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်း
၀၀၄။ ဘဝဆည်းဆာ နှင့်ကရုဏာ
၀၀၁။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ - ၁
၀၀၂။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ - ၂
၀၀၃။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ - ၃
၀၀၄။ နိဗ္ဗာန်တံခါးကြီးဖွင့်တော်မူပါ - ၄
၀၀၁။ အစွမ်းတန်ခိုးများ နှင့်သာသနာ
၀၀၂။ ဘဝ နှင့် ဘဝနိရောဓ
၀၀၃။ ဓမ္မစရီ နှင့် အဓမ္မစာရီ
၀၀၄။ ဗျာကတ နှင့် အဗျာကတ
၀၀၁။ သညာအသိ နှင့် ပညာအသိ
၀၀၂။ သေ၀ိတဗ္ဗ နှင့် နသေဝိတဗ္ဗ
၀၀၃။ ထူပ နှင့် စေတိယ
၀၀၄။ နိုင်သူ နှင့်ရှုံးသူ
၀၀၅။ သင်္ခတ နှင့် အသင်္ခတ
၀၀၁။ နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်နိုင်မှ အပါယ်တံခါးပိတ်မည်
၀၀၂။ နိဗ္ဗာန်သို့ ဦးတည်သွားနေသူ
၀၀၁။ ဆုတောင်းပြည့်ဝ မြတ်ဓမ္မ
၀၀၁။ ရှင်ရာဟုလာ၏ဘဝ နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ -၁
၀၀၂။ ရှင်ရာဟုလာ၏ဘဝ နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ -၂
၀၀၃။ ရှင်ရာဟုလာ၏ဘဝ နှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမ -၃
၀၀၄။ သူယုတ်မာတို့၏အမူအကျင့် - ၁
၀၀၅။ သူယုတ်မာတို့၏အမူအကျင့် - ၂
၀၀၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁)
၀၀၂။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၂)
၀၀၃။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၃)
၀၀၄။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၄)
၀၀၅။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၅)
၀၀၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၆)
၀၀၂။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၇)
၀၀၃။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၈)
၀၀၄။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၉)
၀၀၅။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁၀)
၀၀၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁၁)
၀၀၂။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁၂)
၀၀၃။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း (၁၃)
၀၀၃။ ပြစ်မှားခြင်းနှင့် ဒဏ်သင့်ခြင်း
၀၀၂။ ဘာသာတရားနှင့် ကိုးကွယ်မှုသရဏဂုံ
၀၀၂။ ဘဝနှင့်ဆက်စပ်၍ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၁
၀၀၃။ ဘဝနှင့်ဆက်စပ်၍ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း - ၂
၀၀၁။ ဆဆက္ကဒေသနာနှင့် ဓမ္မဝိပဿနာ
၀၀၄။ မင်္ဂလာနှစ် (၄၀)ပြည့်အနုမောဒနာ
၀၀၃။ မှတ် ဉာဏ်ကောင်းအောင်ကျင့်ဆောင်ခြင်း
၀၀၅။ စုံဆင်းသူ နှင့်ဆန်တက်သူ
၀၀၄။ စရိုက် နှင့်ဝါသနာ
၀၀၁။ အာသသက္ခယကျင့်စဉ် အပိုင်း (၁)
၀၀၂။ အာသသက္ခယကျင့်စဉ် အပိုင်း (၂)
၀၀၃. အာသသက္ခယကျင့်စဉ် အပိုင်း (၃)
၀၀၄။ အာသသက္ခယကျင့်စဉ် အပိုင်း (၄)
၀၀၅။ အာသသက္ခယကျင့်စဉ် အပိုင်း (၅)
၀၀၁။ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား မြှင့်တင်ထား
၀၀၂။ ရှစ်ယောက် တစ်ယောက်
၀၀၃။ စိတ္တာ နုပဿနာ
၀၀၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာနှင့် ယနေ့ ကမ္ဘာ
၀၀၅။ နှစ်ဦးကာလ ဓမ္မလက်ဆောင်
၀၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဘဝ
၀၆။ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေး အနုမောဒနာ
၀၂။ ကျင့်ပုံထူးခြား ဥာဏ်စွမ်းအား
၀၂။ ဆွမ်းကပ် အနုမောဒနာ (ဦးမျီုးသန့်ထွန်း)
၀၃။ သရဏီယ အနုမောဒနာ (ဦးစံသာ)
၀၅။ အနုမောဒနာ သြဝါဒကထာ (ပြင်ဦးလွင်)
၁။ သိက္ခာထပ်မင်္ဂလာနှင့် ဝါဆိုသင်္ကန်းအလှု
၄။ ဘာသာတရားလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
၂။ သုံးသပ်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အမှန်သိခြင်း
၂။ ဘာသာတရားကို လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း
၃။ စဉ်းစားဥာဏ်နှင့် အကျင့်မှန်
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း (၁)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း (၂)
၅။ ကဲ့ရဲ့သောစကားလုံးများဖြင့် ချီးမွမ်းတတ်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်ရည်များ
၃။ သီရိဂေဟာဖြစ်အောင် ကျင့်ဆောင်ပါ
၄။ အဘိရူပနန္ဒာ၏ ဘဝနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ
၄။ နှစ်ဦးမေတ္တာ လူတိုင်းမှာ
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် ဘဝနေထိုင်နည်း
၆။ စိတ္တဘာဝနာဖြင့်သာ စိတ်ဖြူစင်နိုင်သည်။
၄။ ဝက္ကလိရဟန်းအတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားနှင့် ဓမ္မစွမ်းပကား
၆။ မျှော်လင့်ခြင်း၏ အင်အားများ
၃။ စိတ်ကိုစောင့်ကြည့် မြဲသတိထား
၂။ ဘိက္ခူနီ(၅၀၀)နှင့် အရှင်နန္ဒက၏ ဝိပဿနာ အလုပ်ပေးတရား ဒေသနာတော်
၁။ စိတ်၌ဖြစ်ပွား အဆိုးတရားတို့ ၏ လှည့်စားမှုများ (၁)
၂။ စိတ်၌ဖြစ်ပွား အဆိုးတရားတို့ ၏ လှည့်စားမှုများ (၂)
၃။ စိတ်၌ဖြစ်ပွား အဆိုးတရားတို့ ၏ လှည့်စားမှုများ (၃)
၄။ စိတ်၌ဖြစ်ပွား အဆိုးတရားတို့ ၏ လှည့်စားမှုများ (၄)
၅။ စိတ်၌ဖြစ်ပွား အဆိုးတရားတို့ ၏ လှည့်စားမှုများ (၅)
၆။ စိတ်၌ဖြစ်ပွား အဆိုးတရားတို့ ၏ လှည့်စားမှုများ (၆)
၃။ စိတ်ပူပန်မှုကင်းအောင် ကျင့်ဆောင်ခြင်း (၂၁.၂.၂၀၁၂ - ဟင်္သာတ)
၄။ စံထားရမည့် ယဉ်ကျေးမှု (၂၇.၂.၂၀၁၂ - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့ )
၅။ လေ့ကျင့်ပွားများ သညာများ (၆.၃.၂၀၁၂ - ဗဟန်း)
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့်အညီ နေထိုင်ခြင်း (၁၁.၃.၂၀၁၂ -အမရပူရ)
၅။ ကိုးပါသီလဖြင့် ဥပုသ်စောင့်သုံးခြင်း (၁၂.၃.၂၀၁၂ - ကျောက်ဆည်)
၁။ သူ့ အမြင်၊ ကိုယ့်အမြင်နှင့် ဓမ္မအမြင် (၁၅.၂.၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၄။ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမကို လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း (၂၃.၃.၂၀၁၂)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် ညီညွတ်သည့် ဇနီးမောင်နှံဘ၀ (၂၇.၃.၂၀၁၂ - မရမ်းကုန်း)
၃။ ဗျာဒိတ်ဟောကြား ဘုရား (၂၄)ဆူအကြောင်း (၄.၅.၂၀၁၂ - ပြင်ဦးလွင်)
၄။ အံဖွယ်လူသား မြတ်ဘုရား (၅.၅.၂၀၁၂ - ပြင်ဦးလွင်)
၁။ ထူးဆန်းသော သတ္တဝါကြီးများ (၁) (၁၃-၅-၂၀၁၂ - လားရှိုး)
၂။ ထူးဆန်းသော သတ္တဝါကြီးများ (၂) (၁၄-၅-၂၀၁၂ - လားရှိုး)
၃။ လူ့ဆန္ဒ (၁) (၁၉-၅-၂၀၁၂ - သီပေါ)
၄။ လူ့ဆန္ဒ (၂) (၁၉-၅-၂၀၁၂ - သီပေါ)
၁။ ဒုဂ္ဂတိ ဘုံသားတို့၏ အမှာစကား (အပိုင်း ၁)
၂။ ဒုဂ္ဂတိ ဘုံသားတို့၏ အမှာစကား (အပိုင်း ၂)
၃။ ဒုဂ္ဂတိ ဘုံသားတို့၏ အမှာစကား (အပိုင်း ၃)
၄။ ဒုဂ္ဂတိ ဘုံသားတို့၏ အမှာစကား (အပိုင်း ၄)
၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရိယဂုဏ် (၁၆) ပါး (၁) (သမ္ပသာဒနိယသုတ် အနှစ်ချုပ်) (၁၄-၆-၂၀၁၂ - ဇမ္ဗူသီရိ - မရမ်းကုန်း)
၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရိယဂုဏ် (၁၆) ပါး (၂) (သမ္ပသာဒနိယသုတ် အနှစ်ချုပ်) (၁၅-၆-၂၀၁၂ - ဇမ္ဗူသီရိ - မရမ်းကုန်း)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရိယဂုဏ် (၁၆) ပါး (၃) (သမ္ပသာဒနိယသုတ် အနှစ်ချုပ်) (၁၆-၆-၂၀၁၂ - ဇမ္ဗူသီရိ - မရမ်းကုန်း)
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရိယဂုဏ် (၁၆) ပါး (၄) (သမ္ပသာဒနိယသုတ် အနှစ်ချုပ်) (၁၇-၆-၂၀၁၂ - ဇမ္ဗူသီရိ - မရမ်းကုန်း)
၁။ အာဋာနာဋိယသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၉-၆-၂၀၁၂ - အပိုင်း - ၁ )
၂။ အာဋာနာဋိယသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၀-၆-၂၀၁၂ - အပိုင်း - ၂ )
၃။ အာဋာနာဋိယသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၁-၆-၂၀၁၂ - အပိုင်း - ၃ )
၄။ အာဋာနာဋိယသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၂-၆-၂၀၁၂ - အပိုင်း - ၄ )
၁။ သီလသည် နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင် အကျိုးပြုသည် (၁၇-၁-၂၀၁၂)
၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မှာကြားချက်များ (၁၆-၅-၂၀၁၂ - အပိုင်း - ၁)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မှာကြားချက်များ (၁၇-၅-၂၀၁၂ - အပိုင်း - ၂)
၄။ သံသရာခရီးသွား ပျက်စီးမှုတွေ သတိထား (၅-၇-၂၀၁၂)
၁။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း - ၁ )
၂။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း - ၂ )
၃။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း - ၃ )
၄။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း - ၄ )
၅။ မဟာဝေဒလ္လသုတ် အနှစ်ချုပ် (အပိုင်း - ၅ )
၁။ စာနာစိတ် (၃၀-၆-၂၀၁၂)
၂။ သီဟနာဒသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂-၇-၂၀၁၂ - အပိုင်း - ၁ )
၃။ သီဟနာဒသုတ် အနှစ်ချုပ် (၃-၇-၂၀၁၂ - အပိုင်း - ၂ )
၄။ သီဟနာဒသုတ် အနှစ်ချုပ် (၄-၇-၂၀၁၂ - အပိုင်း - ၃ )
၅။ အနုမောဒနာ (သွား ဆေးတက္ကသိုလ်) (၄-၇-၂၀၁၂ )
၁။ သီလစောင့်မှ အူမတောင့်မယ် (၁၀-၅-၂၀၁၂) ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲမြို့
၂။ ဘုရားကြည်ညိုက အပါယ်မကျ (၉-၇-၂၀၁၂) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝက်လက်မြို့)
၃။ ကြီးသူ ငယ်သူ သတ်မှတ်ချက် (၂၁-၇-၂၀၁၂)၊ သံလျှက်မှော်ရှေ၊ မလကာခြံရပ်၊ မန္တလေးမြို့
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာ (၂၃-၇-၂၀၁၂) ၈၅လမ်း၊ ၃၅ လမ်းဒေါင့်၊ မန္တလေးမြို့
၁။ အတွေးမှားကို ဖယ်ရှားနိုင်ရမည်။ ( ၁၄-၇-၂၀၁၂ ) စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့
၂။ ဗုဒ္ဓတိုက်ကျွေး တရားဆေး (၂၄-၇-၂၀၁၂) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့
၃။ တရားဆိုသည်မှာ ပညာဖြင့်သာ သိနိုင်သည်။ (၂၅-၇-၂၀၁၂) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမရပူရမြို့
၄။ သံယောဇဉ်ကို ရှာဖွေခြင်း (၂၆-၇-၂၀၁၂) မန္တလေးမြို့၊ စက်မှုဇုန် (၁))
၁။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ နှင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ (၂၈-၇-၂၀၁၂) ( ရန်ကုန် ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ပုဂံဆောင် )
၂။ စင်ကြယ်အောင် အားထုတ်ခြင်း (၂၉-၇-၂၀၁၂) A.K.H Agency၊ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်
၃။ လမ်းနှစ်သွယ်ဖြင့် သံမတ္တနိယာမသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း (၂၉-၇-၂၀၁၂) ဇဗ္ဗူသီရိဗိမ္မာန်တော်
၄။ ဒွယဝိပဿနာ (၃၀-၇-၂၀၁၂) ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ အိုးဘို ဓမ္မာရုံ
၁။ အနုမောဒနာ (၃၁-၇-၂၀၁၂) (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် မိသားစုနှင့် ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့် ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများ၏ စုပေါင်း ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှုပွဲ)
၂။ ဓမ္မသမာဓိနှင့် စိတ္တသမာဓိ (၁၁-၈-၂၀၁၂) မန္တလေးမြို့
၃။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် အနုမောဓနာ (၁၇-၈-၂၀၁၂) ဟိုတယ် ရန်ကုန် မိသားစု၊
၄။ ဝဇ္ဇီနိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း (၁၉-၈-၂၀၁၂) သန်လျှင်နာရေးကူညီမှုအသင်း
ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့် ဓမ္မ အမြင်
၁။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့် ဓမ္မ အမြင် - အပိုင်း (၁) ၁၄-၈-၂၀၁၂ (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်)
၂။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့် ဓမ္မ အမြင် - အပိုင်း (၂) ၁၅-၈-၂၀၁၂ (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်)
၃။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့် ဓမ္မ အမြင် - အပိုင်း (၃) ၁၆-၈-၂၀၁၂ (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်)
၄။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့် ဓမ္မ အမြင် - အပိုင်း (၄) ၁၇-၈-၂၀၁၂ (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်)
၅။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့် ဓမ္မ အမြင် - အပိုင်း (၅) ၇-၉-၂၀၁၂ (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်)
၆။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့် ဓမ္မ အမြင် - အပိုင်း (၆) ၈-၉-၂၀၁၂ (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်)
၇။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့် ဓမ္မ အမြင် - အပိုင်း (၇) ၉-၉-၂၀၁၂ (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်)
၈။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့၏ ဘဝနှင့် ဓမ္မ အမြင် - အပိုင်း (၈) ၁၀-၉-၂၀၁၂ (ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်)
၁။ မာဂန္ဓီ မိသားစု၏ ဘဝနှင့် သင်ခန်းစာ (၁) (၇-၉-၂၀၁၂) (မိတ္ထီလာမြို့)
၂။ မာဂန္ဓီ မိသားစု၏ ဘဝနှင့် သင်ခန်းစာ (၂) (၈-၉-၂၀၁၂) (မိတ္ထီလာမြို့)
၃။ မာဂန္ဓီ မိသားစု၏ ဘဝနှင့် သင်ခန်းစာ (၃) (၉-၉-၂၀၁၂) (မိတ္ထီလာမြို့)
၄။ ဘုံဘဝမှာ ဆုံမိကြခြင်း ( ၃၀-၈-၂၀၁၂) (ဝမ်းတွင်းမြို့)
၅။ သတ္တဝါတို့၏ ဘဝနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ရှုမြင် သုံးသပ်ချက် (၃၁-၈-၂၀၁၂) ဝမ်းတွင်းမြို့
၁။ အပြစ်ကို ကုစားခြင်း (၈-၈-၂၀၁၂) အမရပူရမြို့
၂။ တရားရှာ ကိုယ်မှာတွေ့ (၉-၈-၂၀၁၂) အမရပူရမြို့
၃။ စိတ်၏ ကျက်စားရာ အာရုံများ (၂၄-၈-၂၀၁၂) မန္တလေးမြို့
၄။ တိုင်ပင် ဆွေးနွေး ကြီးပွားရေး (၃-၉-၂၀၁၂) ညောင်ဦးမြို့
၅။ ဗုဒ္ဓသည် ဓမ္မကို အလေးပြုသည် (၁၁-၉-၂၀၁၂) ဇဗ္ဗူသီရိ ဗိမာန်တော်၊ ရန်ကုန်မြို့
၁။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) ၁၆-၉-၂၀၁၂ (အပ္ပမာဒ တောစခန်းရိပ်သာ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၂။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ၁၇-၉-၂၀၁၂ (အပ္ပမာဒ တောစခန်းရိပ်သာ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၃။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၃) ၁၈-၉-၂၀၁၂ (အပ္ပမာဒ တောစခန်းရိပ်သာ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၄။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၄) ၁၉-၉-၂၀၁၂ (အပ္ပမာဒ တောစခန်းရိပ်သာ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၅။ သလ္လေခသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၅) ၂၀-၉-၂၀၁၂ (အပ္ပမာဒ တောစခန်းရိပ်သာ၊ ပြင်ဦးလွင်)
၁။ အန္တရာယ်ကင်းပရိတ် (ရွှေစံအိမ်)
၂။ အနုမောဒနာ (၁၁-၄-၂၀၁၂ - စစ်ကိုင်း)
၃။ အနုမောဒနာ (၂၃-၃-၂၀၁၂ - SSC)
၄။ အနုမောဒနာ (၁၂-၂-၂၀၁၂ - ဓမ္မစေတီကျောင်း)
၅။ အနုမောဒနာ (၇-၄-၂၀၁၂ - ပြင်ဦးလွင်)
၆။ အနုမောဒနာ (၈-၄-၂၀၁၂ - ပြင်ဦးလွင်)
၇။ အနုမောဒနာ(၁၇-၁-၂၀၁၂ - အမေထွား)
၁။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး (၁၀)ဦး (၁) (၂၇-၉-၂၀၁၂ -မန္တလေး)
၂။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး (၁၀)ဦး (၂) (၂၈-၉-၂၀၁၂ -မန္တလေး)
၃။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး (၁၀)ဦး (၃) (၂၉-၉-၂၀၁၂ -မန္တလေး)
၄။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး (၁၀)ဦး (၄) (၃၀-၉-၂၀၁၂ -မန္တလေး)
၅။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး (၁၀)ဦး (၅) (၁-၁၀-၂၀၁၂ -မန္တလေး)
၆။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသမီး (၁၀)ဦး (၆) (၂-၁၀-၂၀၁၂ -မန္တလေး)
၁။ နိဗ္ဗာန်ကို အကျိုးပြုသောအကျင့် (၂၅-၈-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၂။ သုံးခြင်းနှင့် ဆုံးခြင်း (၂၆-၈-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၃။ အဂတိလေးပါး မလိုက်စားနဲ့ (၂-၉-၂၀၁၂ - ညောင်ဦး)
၄။ ဒါနကောင်းမှု တောင်းဆု (၈) ဖြာ (၅-၉-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ထိပ်တန်းတပည့် (၈) ဦး (၉-၁၀-၂၀၁၂ - မရမ်းကုန်း)
၁။ အဘိဓမ္မာ သင်ယူခြင်းသည် သမ္မာဒိဋ္ဌိဥာဏ်ကို ရင့်သန်စေနိုင်သည်။ (၁၄-၁၀-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၂။ အာမဂန္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် - ၁ (၁၅-၁၀-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၃။ အာမဂန္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် - ၂ (၁၆-၁၀-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၄။ အာမဂန္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် - ၃ (၁၇-၁၀-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၅။ မကြောက်တရား (၁၈-၁၀-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လောကဝိဇယလမ်းစဉ် (အပိုင်း -၁) (၂၆-၁၀-၂၀၁၂ - စင်္ကာပူ)
၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လောကဝိဇယလမ်းစဉ် (အပိုင်း -၂) (၂၇-၁၀-၂၀၁၂ - စင်္ကာပူ)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လောကဝိဇယလမ်းစဉ် (အပိုင်း -၃) (၂၈-၁၀-၂၀၁၂ - စင်္ကာပူ)
၁။ ကုသိုလ်မင်္ဂလာ သြဝါဒ (ဦးရေဝတ) (၂၃-၂-၂၀၁၂)
၂။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် သြဝါဒ (၁၃-၇-၂၀၁၂ - အင်းစိန်)
၃။ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ် (၁၅-၈-၂၀၁၂ - ဓမ္မဗျူဟာ - ဗဟန်း)
၄။ စင်္ကြာဝတေးမင်း ဘဝကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂၀-၁၀-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၅။ လူတိုင်းရှုပွား ဝိပဿနာတရား (၁-၁၁-၂၀၁၂ - လမ်းမတော်)
၆။ မိတ်ကောင်းရှိမှ တရားသိနိုင်သည်။ (၂-၁၁-၂၀၁၂ - မရမ်းကုန်း)
၁။ သတိကောင်းအောင် ကျင့်ဆောင်ခြင်း (၃၀-၈-၂၀၁၂) မိတ္ထီလာမြို့
၂။ ဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးခြင်း (၂၁-၁၀-၂၀၁၂) မန္တလေးမြို့
၃။ ကမ္မဋ္ဌာန်း ဆရာ (၁၂-၁၂-၂၀၁၂) အမရပူရမြို့
၄။ အနုမောဒနာနှင့် သြဝါဒ (ကောင်မြတ်စံ ပညာရေး မိသားစု) (၂၁-၂၂-၂၀၁၂) မန္တလေးမြို့
၁။ ပေါ်လာသည့် အာရုံများနှင့် ရှုပွားရမည့် ဝိပဿနာ (၁၄-၁၁-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၂။ ဝိပဿနာဥာဏ်ရင့်သန်ရေးအကြောင်း (၁၉-၁၁-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၃။ အဖေကို ကယ်သော သမီး (၂၁-၁၁-၂၀၁၂ - ကျောက်ပန်းတောင်း)
၄။ စွမ်းအားပြည့်လျှံ အားနှစ်တန် (၂၈-၁၁-၂၀၁၂ - မရမ်းကုန်း)
၅။ သောတာပန် ပုဂ္ဂုလ်များနေ့စဉ်ဘဝမှာ နေထိုင်ကြပုံ (၂၉-၁၁-၂၀၁၂ - လမ်းမတော်)
၁။ ဗိမ္မိသာရမင်း၏ ဘဝနှင့် သင်ခန်းစာ (၄-၁၀-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၂။ ဒါနတရားနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သဘောထား (၁၉-၁၀-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၃။ ယမကရဟန်း၏ အမြင်မှားနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ သွန်သင်မှု (၂၃-၁၀-၂၀၁၂ - အမရပူရ)
၄။ ကျေးးဇူးတရား အလေးထားခြင်း (၂၄-၁၁-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၁။ တို့ပြည် တို့ရွာ တို့သာသနာ ( အပိုင်း - ၁) ၂၂-၁၁-၂၀၁၂ ချောက်မြို့
၂။ တို့ပြည် တို့ရွာ တို့သာသနာ ( အပိုင်း - ၂) ၂၃-၁၁-၂၀၁၂ ချောက်မြို့
၃။ ရှင်နာဠက၏ မောနေယျ ပဋိပဋာ (၁) (၂၅-၁၁-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၄။ ရှင်နာဠက၏ မောနေယျ ပဋိပဋာ (၂) (၂၆-၁၁-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၅။ ရှင်နာဠက၏ မောနေယျ ပဋိပဋာ (၃) (၂၇-၁၁-၂၀၁၂ - မန္တလေး)
၁။ ဒေါသစရိုက်နှင့် ရန်သူ့အကြိုက် (၃၀-၁၁-၂၀၁၂ - တော်ဝင်စင်တာ)
၂။ ကာမဂုဏ် ကင်းတဲ့ ပီတိ (၃-၁၂-၂၀၁၂ - လသာ)
၃။ ခန္ဓာဝန်ကို စင်ကြယ်စွာ ထမ်းဆောင်ခြင်း (၄-၁၂-၂၀၁၂ - မင်္ဂလာဒုံ)
၄။ ဒါနအခြေခံတဲ့ သမထ ဝိပဿနာ (၆-၁၂-၂၀၁၂ - စစ်ကိုင်း)
၁။ (၁၈) ပါး မဟာဝိပဿနာ တရား (၂၇-၁၂-၂၀၁၂ - မရမ်းကုန်း)
၂။ အနုမောဒနာ (ရဟန်းခံ) (၃၀-၁၂-၂၀၁၂ - မရမ်းကုန်း)
၃။ ၂၀၁၂ -ခုနှစ် နောက်ဆုံးနေ့ ဓမ္မအတွေးများ (၃၁-၁၂-၂၀၁၂)
၄။ မေတ္တာကမ္ဘာ၏ စွမ်းဆောင်မှု အကြီးမားဆုံးသော တရား (၂)ပါး (၁-၁-၂၀၁၃ - ဗဟန်း)
၅။ နှစ်သစ်အခါမှာ ကျက်သရေရှိအောင် နေထိုင်ပါ (၂-၁-၂၀၁၂ - ကမာရွတ်)
၁။ အားကိုးစရာ လူတိုင်းမှာ (၁၂-၁-၂၀၁၃ - တောင်ဥက္ကလာ)
၂။ ဓမ္မအရည်အချင်း (၄)ရပ် (၁၃-၁-၂၀၁၃ - ရန်ကင်း)
၃။ ဥပါဒါန် အစွဲရှိလျှက် ဂတိမြဲသူများ (၁) (၁၄-၁-၂၀၁၃ - စမ်းချောင်း)
၄။ ဥပါဒါန် အစွဲရှိလျှက် ဂတိမြဲသူများ (၂) (၁၅-၁-၂၀၁၃ - စမ်းချောင်း)
၅။ ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာ ကြိုးစားအားထုတ်ပါ (၁၆-၁-၂၀၁၃ - မရမ်းကုန်း)
၁။ သာရဏီယ သြဝါဒ (မဂီလာဦး ဆွမ်းကျွေး) ( ၁၀-၃-၂၀၁၂ ၊ သာကေတမြို့နယ်)
၂။ ဘာသာတရားဆိုတိုင်း လိုက်နာသင့်သလား (၂၂-၇-၂၀၁၂၊ ကျောက်ဆည်)
၃။ သည်းခံခြင်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ထိန်းသိမ်းခြင်း (၅-၁-၂၀၁၃) မန္တလေးမြို့
၄။ ဖြည့်ကြကိုယ်စီ မြတ်ပါရမီ (၁၈-၃-၂၀၁၃၊ နေပြည်တော်၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်)
၁။ အစွမ်းထက်သော ကာကွယ်မှု (၂၁-၉-၂၀၁၂) (မန္တလေးမြို့)
၂။ သြဝါဒတရား (လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဓမ္မဒီပဗုဒ္ဓစာပေသင်တန်း ၂၀၁၃ နှစ်ဦးသြဝါဒခံယူပွဲ)
၃။ အမှီကောင်း ရှိသူ (၆-၁-၂၀၁၃) (မန္တလေးမြို့)
၄။ ဒုစရိုက် အဆိုး ပုံရိပ်များ (၃-၂-၂၀၁၃) (မန္တလေးမြို့)
၁။ ဝေဒနာကို ဝိပဿနာဥာဏ်ဖြင့် ရှုမြင် သုံးသပ်ခြင်း (၁၉-၁-၂၀၁၃ ၊ ပျဉ်းမနားမြို့)
၂။ စိတ်ကူးကြံစည် အာဇာနည် (၂၂-၁-၂၀၁၃၊ တောင်ငူ)
၃။ သီလနှင့် ပညာ (၂၃-၁-၂၀၁၃၊ တောင်ငူ)
၄။ အကျိုးသက်ရောက်မှုခြင်း မတူသည့် သူတို့နှစ်ယောက် (၂၅-၁-၂၀၁၃၊ စမ်းချောင်း)
၅။ ဘဝချမ်းသာနှင့် ဓမ္မပီတိ (၂၆-၁-၂၀၁၂၊ နံနက်၊ ကမာရွတ်)
၁။ ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ (၂၆-၁-၂၀၁၃၊ လှိုင်မြို့နယ်)
၂။ အင်္ဂုလိမာလသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၇-၁-၂၀၁၂၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း မိသားစု၊ မြေနီကုန်း)
၃။ ဝဋသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၈-၁-၂၀၁၃၊ ညောင်တန်းမိသားစု၊ ပုဇွန်တောင်)
၄။ မောရသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၉-၁-၂၀၁၃၊ တာမွေ)
၁။ အနုမောဒနာရေစက်ချ (၂၆-၂-၂၀၁၁) မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂယာကျောင်းတိုက်၊ မြေနီကုန်း၊ စန်းချောင်း
၂။ သုံးပါးရတနာ ကိုးကွယ်ပါ (၂၄-၂-၂၀၁၃) သဒ္ဓမဇောတကသုဗောဓာရုံ၊ မုံရွာမြို့
၃။ ကိုးကွယ်မှုကို ရွေးချယ်ခြင်း (၂၈-၂-၂၀၁၃) ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ရန်ကုန်
၄။ နှလုံး စိတ်ဝမ်း အေးချမ်းခြင်း (၁-၃-၂၀၁၃) သာသနမဉ္ဇူ သီလရှင် စာသင်တိုက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
၅။ ရဟန္တာ (၂-၃-၂၀၁၃) မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ဇမ္ဗူသီရိဗိမ္မာန်
ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၁) မှ (၉)
ကမ္ဘာအေး ဘုရားဝန်း၊ မရမ်းကုန်း တွင် ဟောကြားသည်
၁။ ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၁) (၁၄-၆-၂၀၀၉)
၂။ ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၂) (၂၅-၇-၂၀၀၉)
၃။ ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၃) (၆-၉-၂၀၀၉)
၄။ ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၄) (၁၂-၁၂-၂၀၁၀)
၅။ ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၅) (၁၈-၁၂-၂၀၁၀)
၆။ ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၆) (၂၅-၁၂-၂၀၁၀)
၇။ ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၇) (၂၂-၁-၂၀၁၁)
၈။ ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၈) (၂၉-၁-၂၀၁၁)
၉။ ဝိဘင်္ဂကျမ်း အပိုင်း (၉) (၃-၈-၂၀၁၁)
ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ အောင်ချမ်းသာရွာ၊ ဓမ္မသာဟာရ သာသနစင်တာ၊ သာသနာပြုဋ္ဌာနတွင် ဟောကြားသော တရားတော်များ
၁။ ခန္ဓာငါးပါးမှာ အားကိုးစရာမရှိ (၁၄-၄-၂၀၁၃၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ဓမ္မသာဟာရ သာသနစင်တာ)
၂။ စူဠပုဏ္ဏမသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၅-၄-၂၀၁၃၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ဓမ္မသာဟာရ သာသနစင်တာ)
၃။ မဟာပုဏ္ဏမသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) (၁၆-၄-၂၀၁၃၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ဓမ္မသာဟာရ သာသနစင်တာ)
၄။ မဟာပုဏ္ဏမသုတ် အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) (၁၇-၄-၂၀၁၃၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ဓမ္မသာဟာရ သာသနစင်တာ)
၁။ သီလဿ သနာ (၁၃-၄-၂၀၁၃၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ဓမ္မသာဟာရ သာသနစင်တာ)
၂။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ် အလုပ်ပေးတရား (၁) (၁၄-၄-၂၀၁၃၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ဓမ္မသာဟာရ သာသနစင်တာ)
၃။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ် အလုပ်ပေးတရား (၂) (၁၅-၄-၂၀၁၃၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ဓမ္မသာဟာရ သာသနစင်တာ)
၄။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ် အလုပ်ပေးတရား (၃) (၁၆-၄-၂၀၁၃၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ဓမ္မသာဟာရ သာသနစင်တာ)
၁။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အလုပ်ပေး(၁) (၁၄.၄.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်)
၂။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အလုပ်ပေး၂) (၁၅.၄.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်)
၃။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အလုပ်ပေး(၃) (၁၆.၄.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်)
၄။ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်အလုပ်ပေး(၄) (၁၇.၄.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်)
၁။ အာရုံကိုအနိုင်ယူသည့်စိတ် (၂၅.၂.၂၀၁၃ - မုံရွာ)
၂။ အနုမောဒနာ (၂၄.၅.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဂယာအမှတ်တရလေးဆယ့်ကိုးည (၂၆.၅.၂၀၁၃ - နေပြည်တော်)
၄။ မြန်မာတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာတရား (၁.၆.၂၀၁၃ - စင်္ကာပူ)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြာပန်းအမှတ်တရ (၃.၆.၂၀၁၃ - စင်္ကာပူ)
၁။ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ခြင်း (၇-၁-၂၀၁၃) (မန္တလေးမြို့)
၂။ အကျိုးအပြစ်ကို ခံစားသိမြင်ခြင်း (၃၁-၁-၂၀၁၃) (မန္တလေးမြို့)
၃။ စာသင်စာချ ပြုကြသာသနာ (၄-၃-၃၀၁၃) (စစ်ကိုင်းမြို့)
၄။ သြဝါဒ (ဝိဘဇ္ဇဝါဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ အခြေခံသင်တန်း) (၁၁-၃-၂၀၁၃) (အမရပူရမြို့)
၅။ ဓမ္မစွမ်းအားနှင့် စွမ်းဆောင်မှုများ (၁၂-၃-၂၀၁၃) (မန္တလေး၊ ထုံးဘို)
၁။ ဓမ္မပါလရွာ (၁၅.၅.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၂။ ငြိမ်းချမ်းသာယာ ဒို့ပြည်ရွာ (၂၁.၅.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဒ၏စီးတော်မြင်းကဏ္ဍကတို့၏ဆုံတွေ့ခြင်း (၂၃.၅.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၄။ ရောင့်ရဲမှုရှိတာနှင့်မရှိတာ (၁၆.၆.၂၀၁၃ - မရမ်းကုန်းမြို့နယ်)
၅။ အနုမောဒနာ (၁၁.၇.၂၀၁၃ - ရန်ကုန်၊မြန်မာကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း)
(အပိုင်း ၁ မှ အပိုင်း ၈ ထိ) ၁၁.၇.၂၀၁၃ မှ ၁၈.၇.၂၀၁၃ ထိ
၁။ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက် (အပိုင်း ၁) ၁၁-၇-၂၀၁၃ (ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၂။ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက် (အပိုင်း ၂) ၁၂-၇-၂၀၁၃ (ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၃။ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက် (အပိုင်း ၃) ၁၃-၇-၂၀၁၃ (ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၄။ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက် (အပိုင်း ၄) ၁၄-၇-၂၀၁၃ (ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၅။ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက် (အပိုင်း ၅) ၁၅-၇-၂၀၁၃ (ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၆။ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက် (အပိုင်း ၆) ၁၆-၇-၂၀၁၃ (ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၇။ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက် (အပိုင်း ၇) ၁၇-၇-၂၀၁၃ (ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၈။ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက် (အပိုင်း ၈) ၁၈-၇-၂၀၁၃ (ဇမ္ဗူသီရိဗိမာန်တော်)
၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏စကားတော်များ (၂၄.၅.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၂။ လိုချင်နေသမျှ ဘဝမဆုံးနိုင် (၃.၇.၂၀၁၃ - စဉ့်ကူးမြို့နယ်)
၃။ ဓဇဂ္ဂသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၂.၆.၂၀၁၃ - စစ်ကိုင်းမြို့)
၄။ အနုမောဒနာ (သန္တိသုခရွှေလရောင်ကျောင်းတော်) (၂၄.၆.၂၀၁၃ - ချောက်မြို့)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ဝါဆိုလပြည့်နေ့အမှတ်တရများ (၂၂.၇.၂၀၁၃ - ပြင်ဦးလွင်မြို့)
အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ)
အပိုင်း ၁ မှ ၁၀ အထိ (၂၇.၇.၂၀၁၃ မှ ၃၁.၇.၂၀၁၃ ထိ)
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဟာသုဗောဒါရုံ ကျောင်းတိုက်
၁။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၁) ၂၇-၇-၂၀၁၃
၂။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၂) ၂၇-၇-၂၀၁၃
၃။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၃) ၂၈-၇-၂၀၁၃
၄။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၄) ၂၈-၇-၂၀၁၃
၅။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၅) ၂၉-၇-၂၀၁၃
၆။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၆) ၂၉-၇-၂၀၁၃
၇။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၇) ၃၀-၇-၂၀၁၃
၈။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၈) ၃၀-၇-၂၀၁၃
၉။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၉) ၃၁-၇-၂၀၁၃
၁၀။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ပထမအတွဲ) (အပိုင်း ၁၀) ၃၁-၇-၂၀၁၃
အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ်
အပိုင်း ၁ မှ ၁၀ အထိ (၂၄.၈.၂၀၁၃ မှ ၂၈.၈.၂၀၁၃ ထိ)
၁။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၁) ၂၄-၈-၂၀၁၃
၂။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၂) ၂၄-၈-၂၀၁၃
၃။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၃) ၂၅-၈-၂၀၁၃
၄။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၄) ၂၅-၈-၂၀၁၃
၅။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၅) ၂၆-၈-၂၀၁၃
၆။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၆) ၂၆-၈-၂၀၁၃
၇။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၇) ၂၇-၈-၂၀၁၃
၈။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၈) ၂၇-၈-၂၀၁၃
၉။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၉) ၂၈-၈-၂၀၁၃
၁၀။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် နှင့် သုတ္တန်အနှစ်ချုပ် (ရက်တိုသင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ) (အပိုင်း ၁၀) ၂၈-၈-၂၀၁၃
အပိုင်း ၁ မှ ၁၃ အထိ
(၇.၈.၂၀၁၃ မှ ၂၀.၈.၂၀၁၃ ထိ)
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မဟာသုဗောဒါရုံ ကျောင်းတိုက် (ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ)
၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၇-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၇-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၈-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၈-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၉-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၉-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၀-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၀-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၁-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၁၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၁-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၁၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၂-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၁၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၂-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၁၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၃-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ (ရက်ရှည်သင်တန်း) (ဒုတိယအတွဲ)
၁၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၃-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၁၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၄-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၁၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၄-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၁၇။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၅-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၁၈။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၆-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၁၉။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၇-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၂၀။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၇-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၂၁။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၈-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၂၂။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၈-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၂၃။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၉-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၂၄။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၁၉-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၂၅။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၂၀-၈-၂၀၁၃ နံနက်ပိုင်း ၉ မှ ၁၀ နာရီ
၂၆။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနိဒ္ဒေသ အပိုင်း (၁) ရက်ရှည်သင်တန်း အမှတ်(၁) ၂၀-၈-၂၀၁၃ နေ့လည်ပိုင်း ၂ မှ ၃ နာရီ
၁။ ကြည်ညိုစိတ်၏ အခြေခံအကြောင်းများ (၂၂-၄-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၂။ မတွေးသင့်သော အတွေးများ (၂၀-၇-၂၀၁၃) (ကျောက်ဆည်)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သံဝေဂတရားနှင့် အဆုံးအမ စကား (၈-၉-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၄။ အရဏဝိဘင်္ဂသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၄-၉-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၅။ ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ လူ့ဘဝဖော်ဆောင်ရေး (၂၁-၉-၂၀၁၃) (ပြင်ဦးလွင်)
၁။ အနုမောဒနာ (၁၅.၇.၂၀၁၃ - သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် - ရန်ကုန်)
၂။ သြဝါဒ အနုမောဒနာ (၇.၈.၂၀၁၃ - အောင်ချမ်းသာ ပြင်ဦးလွင်)
၃။ မေတ္တသုတ် အနှစ်ချုပ် (၃.၉.၂၀၁၃ - မန္တလေး၊ ချမ်းအေးသာဇံရပ်)
၄။ ဘဝရိက္ခာ (၂၀.၈.၂၀၁၃ - မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်း)
၅။ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာ (၂၁.၈.၂၀၁၃ - မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်း)
၆။ အနုဓမ္မကျင့်စဉ် (၂၂.၈.၂၀၁၃ - မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်း)
၁။ လူစိတ်ကင်းမဲ့သောလူ (၅-၁၂-၂၀၁၂) (စစ်ကိုင်း)
၂။ ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရား (၁၁-၃-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၃။ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကို ပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (၂၈-၉-၂၀၁၃) (မန္တလေး၊ အမရပူရမြို့)
၄။ သြဝါဒ (၃၀-၉-၂၀၁၃) (ပြင်ဦးလွင်)
၅။ ပညာရှင်များသာ သိနိုင်တဲ့တရား (၁-၁၀-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၁။ ဘဝခရီးဝယ် လမ်းနှစ်သွယ် (၁) (၇-၄-၂၀၁၃) (တောင်ကြီးမြို့)
၂။ ဘဝခရီးဝယ် လမ်းနှစ်သွယ် (၂) (၈-၄-၂၀၁၃) (တောင်ကြီးမြို့)
၃။ ဘဝခရီးဝယ် လမ်းနှစ်သွယ် (၃) (၉-၄-၂၀၁၃) (တောင်ကြီးမြို့)
၄။ ဥစ္စာဓန ရှာဖွေကြ (၉-၄-၂၀၁၃) (တောင်ကြီးမြို့)
၅။ စိတ်ဆင်ရိုင်းနှင့် ပညာချွန်း (၂၃-၁၀-၂၀၁၃) (ကျောက်ဆည်)
၁။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၁) (၃-၁၀-၂၀၁၃) (ကူမဲမြို့)
၂။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၂) (၄-၁၀-၂၀၁၃) (ကျောက်ဆည်မြို့)
၃။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၃) (၅-၁၀-၂၀၁၃) (မိတ္ထီလာမြို့)
၄။ ဝိပဿနာရှုဖွယ် တောလေးဆယ် (၄) (၆-၁၀-၂၀၁၃) (မန္တလေးမြို့)
၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဂုဏ်ရည်များ (၂-၁၀-၂၀၁၃) (ကျောက်ဆည်မြို့)
၂။ အနုမောဒနာသြဝါဒ (၁၂-၁၀-၂၀၁၃) (မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဓမ္မာရုံ)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အမှတ်တရများ (၁၉-၁၀-၂၀၁၃) (ဗဟန်း၊ ကမ္ဘာအေး)
၄။ ဘုရားနှင့် တွေ့အောင်ကြိုးစားပါ (၁-၉-၂၀၁၃) (အမရပူရမြို့)
၅။ ပရာဘဝသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁၂-၁၀-၂၀၁၃) (မန္တလေး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်)
၁။ တန်ခိုးရှင်ဖြစ်ရုံနှင့် အသိဥာဏ်မရှိနိုင်ပုံ (၄-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၂။ နောက်ဆုံးလူမဖြစ်စေနဲ့ (၁၀-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၃။ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်း (၂၈-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၄။ ဘဝကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ (၂၉-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၅။ သူတော်ကောင်းတို့၏ ဂုဏ်ရနံ့အကြောင်း (၃-၁၂-၂၀၁၃) (ချမ်းမြသာစည်၊ မန္တလေး)
၁။ ရဟန္တာဖြစ် အကြောင်းမှန် ၂-၁၂-၂၀၁၃
၂။ အတ္တဟိတနှင့် ပရဟိတ အကြောင်း ၅-၁၂-၂၀၁၃
၃။ ဆက်ဆံရေး တရား ဒေသနာတော် ၆-၁၂-၂၀၁၃
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမအရ လူတော်လူကောင်း အရည်အချင်းများ တရားတော် ၇-၁၂-၂၀၁၃
၅။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် အမျှော်အမြင် တရားဒေသနာတော် ၈-၁၂-၂၀၁၃
၁။ မိဘနှင့် သားသမီးအကြား မှန်ကန်သော အမြင်များ
၂။ ဘာဝနာ နှစ်ပါး စိတ်ခွန်အား
၃။ အများအကျိုးပြု ကောင်းမှုပါရမီ
၄။ သုံးသပ်ဆင်ခြင် စိတ်ထားပြင်
၅။ စိတ်ကောင်းရှိဖို့က ပထမ
၁။ ဘုရားနှင့် တွေ့အောင်ကြိုးစားပါ
၂။ တန်ခိုးရှင်ဖြစ်ရုံနှင့် အသိဥာဏ် မရှိနိုင်ပုံ
၃။ အဆိုးဆုံးဒုက္ခနှင့် အကောင်းဆုံးချမ်းသာ
၄။ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ခြင်း
၅။ ဘဝကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ
၁။ သူတော်ကောင်းတို့၏ ဂုဏ်ရနံ့
၃။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီသသော နေထိုင်ခြင်း
၄။ မိဘရိပ်မှာ အကြင်နာ
၅။ သာသနာ့ အရိပ်မှာ ပညာ
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၉) (၂၁-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေးတိုင်း)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၀) (၂၂-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေးတိုင်း)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၁) (၂၃-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေးတိုင်း)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၂) (၂၄-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေးတိုင်း)
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၃) (၂၅-၁၁-၂၀၁၃) (စစ်ကိုင်း)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၄) (၂၆-၁၁-၂၀၁၃) (ရေစကြို)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၅) (၂၇-၁၁-၂၀၁၃) (ရေစကြို)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၆) (၃၀-၁၁-၂၀၁၃) (မန္တလေး)
၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၇) (၁-၁၂-၂၀၁၃) (လမ်းမတော်)
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၈) (၄-၁၂-၂၀၁၃) (ချမ်းသာအေးစံ၊ မန္တလေး)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၁၉) (၁၄-၁၂-၂၀၁၃) (မရမ်းကုန်း)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၀) (၁၅-၁၂-၂၀၁၃) (မရမ်းကုန်း)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၁) (၁၆-၁၂-၂၀၁၃) (မရမ်းကုန်း)
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၂) (၂၀-၁၂-၂၀၁၃) (မော်လမြိုင်)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၃) (၂၁-၁၂-၂၀၁၃) (မော်လမြိုင်)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၄) (၂၂-၁၂-၂၀၁၃) (မော်လမြိုင်)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၅) (၂၃-၁၂-၂၀၁၃) (မော်လမြိုင်)
၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၆) (၂၄-၁၂-၂၀၁၃) (မော်လမြိုင်၊ မုဒုံ)
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၇) (၂၅-၁၂-၂၀၁၃) (မော်လမြိုင်၊ မုဒုံ)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၈) (၂၇-၁၂-၂၀၁၃) (မရမ်းကုန်း)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၂၉)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၀)
၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၁)
၁။ သတိပြုရှောင်ရှား ခိုးခြင်းနှစ်ဆယ်ငါးပါး (၁) (၁၀-၁-၂၀၁၄) (ကမာရွတ်)
၂။ သတိပြုရှောင်ရှား ခိုးခြင်းနှစ်ဆယ်ငါးပါး (၂) (၁၀-၁-၂၀၁၄) (ကမာရွတ်)
၃။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ (၁၂-၁-၂၀၁၄) (ကမာရွတ်)
၄။ တရားပွဲမှ ရရှိသော အကျိုးအမြတ် (၁၈-၁-၂၀၁၄) (ကမာရွတ်)
၅။ မစ္ဆရိယ အဖွင့် (၂၂-၁-၂၀၁၄) (ပန်းဘဲတန်း)
၁။ ဓမ္မအစစ်ဖြင့် ဘဝအနှစ်ကို ရယူခြင်း (၁၃-၁၂-၂၀၁၂) (မန္တလေး)
၂။ အဘယဌာနီ ဘေးမဲ့ပြည်(၄-၁-၂၀၁၄) မန္တလေး၊ ပုဂံမြို့သစ်)
၃။ ပရဟိတဒါနနှင့် မြတ်ပုည (၇-၁-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၄။ သားကောင်း သမီးကောင်း (၁၇-၁-၂၀၁၄) (တောင်ဒဂုံ)
၅။ သူတို့ဘဝ သူတို့အကြောင်း တစေ့တစောင်း (၂၀-၁-၂၀၁၄) (ထန်းတပင်၊ ရန်ကုန်)
၁။ အနုဗုဒ္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂၃-၁-၂၀၁၄) (ရန်ကင်း)
၂။ မာနခက်ထန်သူကို ဆုံးမခြင်း (၂၄-၁-၂၀၁၄) (မရမ်းကုန်း)
၃။ သမဂ္ဂနှင့် ဝိဝါဒ (၂၅-၁-၂၀၁၄) (ပဲခူးတိုင်း)
၄။ ပိဋကစာပေအရ တဖုဿနှင့် ဘလ္လိကတို့ ဘဝအကြောင်း (၂၆-၁-၂၀၁၄) (စမ်းချောင်း)
၅။ ဝိသာခ၏ ညီမကို ဆုံးမခြင်း (၂၇-၁-၂၀၁၄) (စမ်းချောင်း)
၁။ ပုထုဇဉ်များ၏ ဘဝပန်ချီကား (၂၈-၁-၂၀၁၄) (စမ်းချောင်း)
၂။ ဉာဏဒဿန အကြောင်းတရားကို ရှာဖွေခြင်း (၂၉-၁-၂၀၁၄) (တိပိဋက၏ ပုလဲရတုအကြို)
၃။ အပြစ်တင်ခြင်းနှင့် ကဲ့ရဲ့ခြင်း (၂၉-၁-၂၀၁၄) (၃၁-လမ်း၊ ရန်ကုန်)
၄။ အရှင်ပါကုလ မထေမြတ်၏ ဆုံးမ စကား (၁-၂-၂၀၁၄) (တာမွေ)
၅။ ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဖြင့် နေထိုင်ခြင်း (၅-၂-၂၀၁၄) (မြန်မမာ့ကြယ်ငါးပွင့်ရုံခန်း)
၁။ ဗိမာန်ရှင်တို့၏ ပြန်ကြားချက်များ (၁) (၂-၂-၂၀၁၄) (ကျားကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ တာမွေ)
၂။ ဗိမာန်ရှင်တို့၏ ပြန်ကြားချက်များ (၂) (၃-၂-၂၀၁၄) (လှိုင်သာယာ)
၃။ ဗိမာန်ရှင်တို့၏ ပြန်ကြားချက်များ (၃) (၄-၂-၂၀၁၄) (ဘောက်ထော်)
၄။ ဒါနအရာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မိန့်မှာချက် (၁၁-၂-၂၀၁၄) (ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ မိသားစု)
၅။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရန် အခြေခံတရား (၁၆-၂-၂၀၁၄) (တွံတေး)
၁။ ဇာတိမြေမှ သာသနာ
၂။ ဘဒ္ဒေကသုတ် အနှစ်ချုပ်
၃။ မေးခွန်းထုတ်၍ အဖြေရှာခြင်း
၄။ ကြိုတင်ကောင်းမှု ကြိုးစားပြု
၅။ ခိုင်မာစိတထား မြတ်တရား
၁။ တမလွန်ဘဝအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ (၁၉-၁၂-၂-၁၃) (ကျိုက်ထို)
၂။ ဓမ္မစာပေသင်ယူခြင်းနှင့် မှန်ကန်သော အမြင် (၂-၃-၂၀၁၁) (မြင်းခြံမြို့)
၃။ သာမညဖလနှင့် တန်ဆောင်တိုင်ည၏ အမှတ်တရ (၁၇-၁၁-၂၀၁၃) (မရမ်းကုန်း၊ ဇဗဗူသီရိခန်းမ)
၄။ ပညာရှိစကားဝိုင်း (၁၆-၁၁-၂၀၁၃) (စမ်းချောင်း)
၅။ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်ရမည် (၁၈-၁၂-၂၀၁၃) (အင်းစိန်)
၁။ ကစ္စာနဂေါတ္တသုတ္တန် (၂၄-၁၂-၂၀၁၃) မော်လမြိုင်၊ ဖားအောက်တောရ)
၂။ နှစ်မျိုးလုံးကောင်းတဲ့ မလုပ်တာနဲ့ လုပ်တာ (၃၁-၁၂-၂၀၁၃) (သာကေတ၊ ရန်ကုန်)
၃။ မဟာသာဝကကြီးတို့၏ စကားဝိုင်း (၁-၁-၂၀၁၄) (နေပြည်တော်)
၄။ ပရဟိတသမား စိတ်ခွန်အား (၁-၁-၂၀၁၄) (မ။ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်)
၅။ ကျေးလက်ဒေသ မြန်မာအမွေအနှစ်များ (၂-၇-၂၀၁၃) (စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ရွာ)
၁။ မိကောင်း ဖကောင်း (၁၆-၁-၂၀၁၄) (ပဲခူးမြို့)
၂။ ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုးကွယ်မှု (၂၆-၁-၂၀၁၄)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အမွေအနှစ်များ (၁၅-၂-၂၀၁၄) (စစ်ကိုင်း)
၄။ ကံနှင့် ကိလေသာ (၁၇-၂-၂၀၁၄) (လှိုင်မြို့နယ်)
၅။ အာမခံသူမရှိတဲ့ တရားများ (၂၂-၂-၂၀၁၄) (နေပြည်တော်)
၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားဆုံးမသည့် လူသားတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရား
၂။ သုံးပါးရတနာ ကိုးကွယ်ပါ (၂၄-၂-၂၀၁၃) (မုံရွာမြို့)
၃။ ဗုဒ္ဓဟု ဝန်ခံခြင်း (၁၆-၃-၂၀၁၄) (အောင်မြေသာဇံ၊ မန္တလေး)
၄။ အကျိုးကြီးမားသည့် ဆုံဆည်းမှုများ (၁၂-၃-၂၀၁၄) (အောင်မြေသာဇံ၊ မန္တလေး)
၅။ ပညာဖြင့် အသက်မွေးခြင်း (၁၈-၃-၂၀၁၄) (မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်)
၁။ အရှင်အာနန္ဒာ၏ ယုဂအနတ္တဘာဝနာ
၂။ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ၏ ရင်တွင်းစကား
၃။ သံသရာဘဝများနှင့် ရင်တွင်းစကား
၄။ မြန်မာတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပါ
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၂)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၃)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၄)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၅)
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၆)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၇)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၈)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၃၉)
၁။ သင်္ဂါယနာနှင့် သာသနာ
၂။ လူ့ဘဝနှင့် ဓနဥစ္စာ
၃။ ပုထုစဉ်ဘဝနှင့် အရိယာဘဝ
၄။ အရိယာဘဝသို့ ရောက်အောင်ကျင့်ဆောင်ခြင်း
၅။ အသက်ရှည်ရန် အနာမဲ့ကြောင်း ကောင်းမှုကုသိုလ်
၁။ အတုံ့အလှည့်နှင့် ကမ္မနိယာမ၏ သဘောတရားများ
၂။ အားကိုးရတဲ့ မိတ်ဆွေများ
၃။ ဗုဒ္ဓခေတ် သူဌေးကြီးများနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု
၄။ အနုမောဒနာ (ဦးဝင်းမောင် မွေးနေ့)
၅။ ဆရာတော်ကြီး (၇၄) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့
၁။ မြတ်နိဗ္ဗာန်တရားနှင့် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်မှု လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၂။ ရခဲတဲ့ အခွင့်အရေး (၃)ပါး
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ စံပြတပည့်များ
၄။ ဒီဘက်ကမ်းမှ ဟိုဘက်ကမ်းသို့
၁။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ ပို့ချချက် - သြဝါဒ
၂။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁) ပို့ချချက်
၃။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၂) ပို့ချချက်
၄။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၃) ပို့ချချက်
၅။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၄) ပို့ချချက်
၁။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၅) ပို့ချချက်
၂။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၆) ပို့ချချက်
၃။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၇) ပို့ချချက်
၄။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၈) ပို့ချချက်
၅။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၉) ပို့ချချက်
၁။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၀) ပို့ချချက်
၂။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၁) ပို့ချချက်
၃။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၂) ပို့ချချက်
၄။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၃) ပို့ချချက်
၅။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၄) ပို့ချချက်
၁။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၅) ပို့ချချက်
၂။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၆) ပို့ချချက်
၃။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၇) ပို့ချချက်
၄။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၈) ပို့ချချက်
၅။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၁၉) ပို့ချချက်
၁။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၂၀) ပို့ချချက်
၂။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၂၁) ပို့ချချက်
၃။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၂၂) ပို့ချချက်
၄။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၂၃) ပို့ချချက်
၅။ အဘိဓမ္မာသင်တန်း ၁-၅-၂၀၁၄ မှ ၁၄-၅-၂၀၁၄၊ အပိုင်း(၂၄) ပို့ချချက်
၁။ အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ခြင်း
၂။ မြန်မာတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရှင်ပြုမင်္ဂလာ
၃။ အလေးထားခြင်း (၃) မျိုးဖြင့် နေထိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၄။ မေးခွန်းထုတ်၍ အဖြေရှာခြင်း
၅။ အနုမောဒနာ (ဓမ္မသဟာယသာသနစင်တာ)
၆။ အနုမောဒနာ (ရတနာပန်းကုန်းကျောင်းတိုက် ရွှေပြည်သာ)
၁။ အနုမောဒနာတရားတော် ၁၁-၁၁-၂၀၁၃ (ပြင်ဦးလွင်)
၂။ အနုမောဒနာတရားတော် ၂၄-၁၁-၂၀၁၃ (စစ်ကိုင်း)
၃။ အနုမောဒနာတရားတော် ၂၀-၃-၂၀၁၄ (စိမ်းရတနာကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေး)
၄။ အနုမောဒနာတရားတော် ၁၃-၄-၂၀၁၄ (သင်္ကြန်တွင်း) (ပြင်ဦးလွင်)
၅။ အနုမောဒနာတရားတော် ၁၄-၄-၂၀၁၄ (သင်္ကြန်တွင်း) (ပြင်ဦးလွင်)
၆။ အနုမောဒနာတရားတော် ၁၅-၄-၂၀၁၄ (သင်္ကြန်တွင်း) (ပြင်ဦးလွင်)
၇။ မွေးနေ့ အနုမောဒနာတရားတော် ၄-၆-၂၀၁၄ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒတက္ကသိုလ်)
၈။ သတိသမ္ပဇညရှေ့ထား သြဝါဒ တရားတော် ၆-၆-၂၀၁၄ (မ၊ ဒဂုံ၊ ပင်လုံဆေးရုံကြီး)
၁။ ၅၂၈ ဖြာ မေတ္တာဘာဝနာ
၂။ ကဆုန်လပြည့် ဗျာဒိတ်ပွဲတော်နှင့် အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ (၁)
၃။ ကဆုန်လပြည့် ဗျာဒိတ်ပွဲတော်နှင့် အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ (၂)
၄။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁)
၅။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၂)
၁။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၃)
၂။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၄)
၃။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၅)
၄။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၆)
၅။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၇)
၁။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၈)
၂။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၉)
၃။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁၀)
၄။ ဘာသာရေးထူးချွန်သူ အမျိုးသားများ (၁၁)
၁။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၄၀)
၂။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၄၁)
၃။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၄၂)
၄။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၄၃)
၅။ လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကြိုးပမ်းချက် - အပိုင်း (၄၄)
၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မိသာစု ဘဝ
၃။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရန် အခြေခံတရား
၄။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး၏ ဓမ္မအမြင်
၅။ IDE ဖွင့်ပွဲ (MRTV-4)
၁) အဆင့်ငါးဆင့်ဖြင့် သာသနာကွယ်ခြင်း
၂) ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် နိုင်ငံခြားသားများ
၃) ဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေး ကြိုးပမ်းချက် (အင်္ဂလိပ် + မြန်မာ)
၄) အနုမောဒနာ (မဟာဗောဓိ)
၅) ဓမ္မသဟာယ သာသနာံစင်တာ (မေမြို့)
၁။ ကမ္မနိယာမ သဘောတရားနှင့် ကံကိုကုန်စေတတ်သော တရားဒေသနာတော်
၂။ မဓုပဏ္ဍိကသုတ် အနှစ်ချုပ်
၃။ မဟာသာရောပမာသုတ် အနှစ်ချုပ်
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဖြင့် ချမ်းသာသုခကို ရှာဖွေခြင်း
၅။ အသက်ရှိသမျှ အကျိုးရှိစေရမည်
ဓမ္မသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ် ၂ ပို့ချချက်
၂၀၁၄ မေလ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက် ထိ
အပိုင်း (၀) သြဝါဒ၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၇ မှ ၇း၁၅ နာရီ
အပိုင်း (၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၃) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၂-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၄) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၂-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၅) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၃-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၆) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၃-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၇) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၅-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၈) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၅-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၉) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၆-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၁၀) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၆-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၁၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၇-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၈ မှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၁၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဒိ၊ ၂၇-၅-၂၀၁၄ နံနက် ၉ မှ ၁၀ နာရီ
သုတ္တန္တဘာသာရပ် ဓမ္မပဒပါဋ္ဌိ
၂၀၁၄ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက် ထိ
အပိုင်း (၁) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၁-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၂) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၂-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၃) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၃-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၄) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၄-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၅) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၅-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၆) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၆-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၇) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၇-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၈) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၈-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၉) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၉-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၁၀) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၁၀-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၁၁) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၁၁-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၁၂) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၁၂-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၁၃) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၁၃-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
အပိုင်း (၁၄) ဓမ္မပဒ သင်တန်း ၁၄-၇-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ
၁။ ဇာဒကဒေသနာမှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများ (၁)
၂။ ဇာဒကဒေသနာမှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများ (၂)
၃။ ဇာဒကဒေသနာမှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများ (၃)
၄။ သြဃတရဏသုတ် အနှစ်ချုပ်
၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အရဟံဂုဏ်တော် (၁၃-၄-၂၀၁၄၊ ညပိုင်း)
၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် (၁၄-၄-၂၀၁၄၊ ညပိုင်း)
၃။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နဂုဏ်တော် (၁၅-၄-၂၀၁၄၊ ညပိုင်း)
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သုဂတဂုဏ်တော် (၁၆-၄-၂၀၁၄၊ ညပိုင်း)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လောကဝိဒူဂုဏ်တော် (၁၇-၄-၂၀၁၄၊ ညပိုင်း)
၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရတိဂုဏ်တော်
၇။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သတ္တာဒေဝမနုဿာနံဂုဏ်တော်
၈။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်
၉။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘဂဝါဂုဏ်တော်
၁။ မြတ်ဗုဒ္ဓအပေါ် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ကြည်ညိုမှု
၂။ စိုးရိမ်စိတ်ကို ဖယ်ရှားခြင်း
၃။ စောင့်စည်းမှ ကောင်းမည်
၄။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဂါရဝ
၅။ အနုမောဒနာ (ပြင်ဦးလွင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်)
၁။ ဟိတနှင့် သုခ
၂။ ကိုးကွယ်ခြင်း၏ အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်
၃။ မိတ္တပူဇာ မြတ်ဒေသနာ
၄။ အနုမောဒနာ (ဆရာကြီးဒေါ်ကဉ္စာနာ)
၅။ သီလပေး အနုမောဒနာ
၆။ နိုင်ငငံတော်သမ္မတ၏ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ဆက်ကပ်ခြင်း အခန်းအနား
၂။ ဗုဒ္ဓသီဟနာဒသုတ္တန် အနှစ်ချုပ်
၃။ သူလိုလူစား တရားမရှိ
၄။ လူနှင့်စကား သတိထား
၅။ ချမ်းသာသုခများနှင့် ဓမ္မဝိပဿနာ
၁။ ဗုဒ္ဓဟောကြား သစ္စာတရား (၁)
၂။ ဗုဒ္ဓဟောကြား သစ္စာတရား (၂)
၃။ သူတစ်ပါးအကျိုးတော်ဆောင် ကိုယ်ကျိုးအောင်
၄။ ဇာတကမှ အဏ္ဏဝါ ဗဟုဿုတ
၅။ ဂါရဝနှင့် အဂါရဝ
၁။ စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့သူနှင့် စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်သူ
၃။ ရွှေသားအစစ် လူအနှစ်
၄။ အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက် ရှိသူ
၅။ မကယ်နိုင်တဲ့ဘေး လွတ်မြောက်ရေး
အပိုင်း (၄၅) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၄၆) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၄၇) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၄၈) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၄၉) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၀) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၁) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၂) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၃) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၄) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၅) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၆) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၇) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၈) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၅၉) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၆၀) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဘာသာရပ်
၂၀၁၄ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၇ ရက် ထိ
သြဝါဒ၊ အဘိဓမ္မာသင်တန်း အပိုင်း (၂) ၁-၈-၂၀၁၄ နံနက် ၇ နာရီမှ ၇း၃၀ နာရီ
အပိုင်း (၁) အဘိဓမ္မာသင်တန်း အပိုင်း (၂) ၁-၈-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၂) အဘိဓမ္မာသင်တန်း အပိုင်း (၂) ၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၃) အဘိဓမ္မာသင်တန်း အပိုင်း (၂) ၃-၈-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၄) အဘိဓမ္မာသင်တန်း အပိုင်း (၂) ၄-၈-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၅) အဘိဓမ္မာသင်တန်း အပိုင်း (၂) ၅-၈-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၆) အဘိဓမ္မာသင်တန်း အပိုင်း (၂) ၆-၈-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီ
အပိုင်း (၇) အဘိဓမ္မာသင်တန်း အပိုင်း (၂) ၇-၈-၂၀၁၄ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီ
ဓမ္မပညာသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂)
ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)
၂၀၁၄ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက် ထိ
သြဝါဒ၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၇)နာ၇ီမှ (၇း၃၀) ထိ
အပိုင်း (၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာ၇ီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၂-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာ၇ီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၃) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၃-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာ၇ီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၄) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၃-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာ၇ီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၅) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၄-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာ၇ီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၆) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၄-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာ၇ီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၇) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၅-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာ၇ီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၈) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၅-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာ၇ီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၉) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၆-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာ၇ီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၀) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၆-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာ၇ီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၁) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၇-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာ၇ီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၂) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၇-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၉)နာ၇ီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၃) ပဋိပဒါဉာဏဒဿန ဝိသုဒ္ဒိ နိဒ္ဒေသဘာသာရပ် အပိုင်း(၃)၊ ၂၈-၈-၂၀၁၄ နံနက် (၈)နာ၇ီမှ (၈း၅၀) ထိ
သုတ္တန္တအပိုင်း (၂)
၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ ၈ ရက် ထိ
သြဝါဒ။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၇) နာရီမှ (၇း၃၀) ထိ
အပိုင်း (၁)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၂)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉) နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၃)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၄)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉) နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၅)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၃-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၆)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၃-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉) နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၇)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၄-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၈)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၄-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉) နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၉)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၅-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၀)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၅-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉) နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၁)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၆-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၂)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၆-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉) နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၃)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၇-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၄)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၇-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉) နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၅)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၈-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၈း၅၀) ထိ
အပိုင်း (၁၆)။ သုတ္တန္တအပိုင်း (၂) သလ္လေခသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၈-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉) နာရီမှ (၉း၅၀) ထိ
သုတ္တန္တအပိုင်း(၂)
သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်
၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက် ထိ
အပိုင်း(၁)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၉-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) မှ (၉း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၂)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၉-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) မှ (၁၀း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၃)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁၀-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) မှ (၉း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၄)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁၀-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) မှ (၁၀း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၅)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁၁-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) မှ (၉း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၆)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁၁-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) မှ (၁၀း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၇)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) မှ (၉း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၈)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) မှ (၁၀း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၉)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁၃-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) မှ (၉း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၁၀)။ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁၃-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) မှ (၁၀း၀၀)ထိ
အပိုင်း(၁၁)။ သင်တန်းဆင်း သြဝါဒ၊ သုတ္တန္တအပိုင်း(၂) သဗ္ဗာသဝ သံဝရသုတ် ဘာသာရပ်၊ ၁၄-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၇း၃၀) မှ (၈း၀၀)ထိ
ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ
ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်
၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက် ထိ
သြဝါဒ၊ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၇) နာရီမှ (၇း၃၀) ထိ
အပိုင်း(၁)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၂)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၂-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၃)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၃-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၄)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၃-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၅)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၄-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၆)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၄-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၇)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၅-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၈)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၅-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၉)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၆-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၁၀)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၆-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၁၁)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၇-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၀၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၁၂)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၇-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၉း၁၀) နာရီမှ (၁၀း၀၀) ထိ
အပိုင်း(၁၃)။ ပါဠိကျမ်းစာ ဝိသုဒ္ဓိ မဂ္ဂ အဌကထာ၊ ပဋိပဒါဉာဏ ဒဿန ဝိသုဒ္ဓိ ဘာသာရပ်၊ ၂၈-၉-၂၀၁၄ နံနက် (၈း၁၀) နာရီမှ (၉း၀၀) ထိ
၂၀၁၄ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက် ထိ
သြဝါဒ၊ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၂-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၇) နာရီမှ (၇း၃၀)နာရီ ထိ၊
အပိုင်း (၁)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၂-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊
အပိုင်း (၂)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၃-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊
အပိုင်း (၃)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၄-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊
အပိုင်း (၄)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၅-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊
အပိုင်း (၅)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၆-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊
အပိုင်း (၆)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၇-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊
အပိုင်း (၇)။ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ဘာသာရပ်၊ ပဋိပဒါဉာဏဒဿနဝိသုဒ္ဓိ နိဒ္ဒေသ၊ ၂၈-၇-၂၀၁၄ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၀)နာရီ ထိ၊
၁။ သူတော်ကျေးဇူး အထူးသိမြင်
၂။ သာသနာ့ရေးရာ အဖြာဖြာ
၃။ ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိသူများ
၄။ ဘေးလေးမျိုးကိုရှောင်၍ စင်ကြယ်အောင် နေထိုင်ခြင်း
၅။ အများကြိုက်တဲ့ အမှားစရိုက်များ
၁။ သိက္ခာထပ် အခန်းအနား အနုမောဒနာ တရားတော်
၂။ အောင်မြင်ကြီးပွား အကြောင်းများ
၃။ သဒ္ဓါနန္ဒကျောင်းဆောင် ရေစက်ချအလှူ အနုမောဒနာ
၄။ နှလုံးသားမှ အဆိုးတရားများကို ဖယ်ရှားခြင်း
၅။ ထူးချွန်သူ အကြောင်း
၆။ အမြတ်ဆုံး ကြည်ညိုကိုးကွယ်မှု
၂။ စီးပွားဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း
၃။ ဒါနအကြောင်း မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မိန့်မှာချက်
၄။ ယုဂနဒ္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် (၁)
၅။ ယုဂနဒ္ဓသုတ် အနှစ်ချုပ် (၂)
၁။ ကျက်သရေရှိသော လူ့ဘဝ
၂။ နာဂရောပမသုတ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
၄။ အလေးထားခြင်းများနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာ
၅။ စိတ်စွမ်းအားများနှင့် စွမ်းဆောင်ရာဌာနများ
၆။ အနုဂ္ဂဟိတသုတ် အနှစ်ချုပ်
၁။ စိတ်ကိုသတိဖြင့် စောင့်ကြည့်ရမည်
၂။ အချိန်မနှောင်းမီ ကြိုးစားခြင်း
၃။ အောင်နိုင်ခြင်း (၂) မျိုး
၄။ သြဝါဒ အနုမောဒနာ
၅။ စရိုက်ဆိုးများကို မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း
အပိုင်း (၆၁) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၆၂) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၆၃) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၆၄) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၆၅) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၆၆) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၆၇) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၆၈) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၆၉) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၀) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၁) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၂) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၃) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၄) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၅) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၆) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၇) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၈) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၇၉) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၈၀) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၈၁) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၈၂) လောကသားတို့အတွက် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်
အပိုင်း (၁) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ
အပိုင်း (၂) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ
အပိုင်း (၃) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ
အပိုင်း (၄) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ ဝိဘင်္ဂကျမ်း သုတ္တန္တဘာဇနိယ
၁။ သူတော်ကောင်းတို့၏ အလှူဒါန
၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမဖြင့် ဘဝအောင်မြင်မှုကို ရယူခြင်း
၃။ သြဝါဒ စကား
၄။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်မျိုး တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း
၆။ ယနေ့ကမ္ဘာနှင့် မေတတာတရား
၁။ အနုမောဒနာ သြဝါဒ
၂။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
၃။ လူလောကမှ ကောလဟာလများ
၄။ အနုမောဒနာ သြဝါဒ
၅။ အချိန်နှင့် ကြိုးစား မြတ်တရား
၁။ သံဃာဖခင်ကြီးများကို လေးစားခြင်း (၂၇-၂-၂၀၁၅ - ဗဟန်းမြို့နယ်)
၂။ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားကို ရွေးချယ်ခြင်း (၄-၁-၂၀၁၅ - ပြည်မြို့)
၃။ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး (၅-၁-၂၀၁၅ - ပြည်မြို့)
၄။ အသက်ရှည်လေ ပိုကောင်းလေ ( ၂၃-၂-၂၀၁၅ - လှည်းကူးမြို့ )
၅။ ကျေးဇူးတရားအကြီးမာဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ် သုံးဦး (၂၀-၂-၂၀၁၄ - မြင်းခြံမြို့)
၁။ နှစ်သစ်မင်္ဂလာကို မေတ္တာဖြင့် ကြိုဆိုခြင်း (၁-၁-၂၀၁၅ - ဗဟန်းမြို့နယ်)
၂။ အများအတွက် သံဃာတော်တို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ (၂၆-၂-၂၀၁၅ - မှော်ဘီမြို့)
၃။ ဒါနအခြေခံ မြတ်နိဗ္ဗာန် (၂၂-၃-၂၀၁၅ - မန္တလေးမြို့)
၄။ သံသရာနှင့် နိဗ္ဗာန် - ၁ (၄-၄-၂၀၁၅ - စင်္ကာပူနိုင်ငံ)
၅။ သံသရာနှင့် နိဗ္ဗာန် -၂ (၅-၄-၂၀၁၅ - စင်္ကာပူနိုင်ငံ)
၁။ ကောသလအိမ်မက်နှင့် ယနေ့ ကမ္ဘာ (၁) (၁၃-၄-၂၀၁၅ - ပြင်ဦးလွင်)
၂။ ကောသလအိမ်မင်နှင့် ယနေ့ ကမ္ဘာ (၂) ( ၁၄-၄-၂၀၁၅ - ပြင်ဦးလွင်)
၃။ ကောသလအိမ်မင်နှင့် ယနေ့ ကမ္ဘာ (၃) ( ၁၅-၄-၂၀၁၅ - ပြင်ဦးလွင်)
၄။ ဥပုသ်သည်တို့၏ စကားဝိုင်း (၁၆-၄-၂၀၁၅ - ပြင်ဦးလွင်)
၅။ ရှင်သမိဒ္ဓိနှင့် နတ်မိမယ် (၁၇-၄-၂၀၁၅ - ပြင်ဦးလွင်)
၁။ သီလပေး (၁၃-၄-၂၀၁၅ - ပြင်ဦးလွင်)
၂။ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ဝိပဿနာ (၁၅-၄-၂၀၁၅ - ပြင်ဦးလွင်)
၃။ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ဝိပဿနာ (၁၆-၄-၂၀၁၅ - ပြင်ဦးလွင်)
၄။ သီလပေး (၁၇-၄-၂၀၁၅ - ပြင်ဦးလွင်)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ကောသလမင်းတို့၏ တွေ့ဆုံခြင် မှတ်တမ်းများ (၁)
၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ကောသလမင်းတို့၏ တွေ့ဆုံခြင် မှတ်တမ်းများ (၂)
၇။ မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့် ကောသလမင်းတို့၏ တွေ့ဆုံခြင် မှတ်တမ်းများ (၃)
၁။ အနုမောဒနာ (အမေများအဖွဲ့၊ မန္တလေး)
၂။ အနုမောဒနာ (ဦးဝင်းလွင်ဦး)
၃။ အနုမောဒနာ (ရတနာညီအကိုများအဖွဲ့)
၄။ သူတော်ကောင်းတို့ တောင်းသောဆု (၂၆-၁၀-၂၀၁၄ - ပြင်ဦးလွင်)
၅။ ကံနှင့် ဘဝ အလုပ်နှင့် လုပ်အားခ (၂၇-၁၀-၂၀၁၄ - စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်)
၆။ လူတို့၏ ကာမစ္ဆန္ဒ (၂၉-၁၀-၂၀၁၄ - မန္တလေးမြို့)
၇။ မသူတော်တရားကို အနိုင်ယူခြင် (၃၀-၁၀-၂၀၁၄ - မန္တလေးမြို့)
၁။ အနုမောဒနာ (မမြမြ)
၂။ အနုမောဒနာ (ရဲမှုကြီးမိုရ်ဟိန်း)
၃။ အနုမောဒနာ (မန်းမြင့်မိုရ်ဟိန်း)
၄။ အညစ်အကြေးများ ထာဝရသန့်စင်ရေး (၃၁-၁၀-၂၀၁၄ - မန္တလေးမြို့)
၅။ လူ့အရည်အချင်းများ (၂-၁၁-၂၀၁၄ - မန္တလေးမြို့)
၆။ မျက်စီးမှုကို ရှောင် ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစား (၃-၁၁-၂၀၁၄ - မန္တလေးမြို့)
၇။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ လူနေမှု (၄-၁၁-၂၀၁၄ - ညောင်ဦးမြို့)
၁။ အနုမောဒနာ (ဦးသောင်းလွင်+ဒေါ်နုနုရီ)
၂။ အနုမောဒနာ (ဦးမောင်မောင် + ဒေါ်နန်းစံဖုန်း)
၃။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်ရီရီ)
၄။ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရသူနှင့် မရသူ
၅။ သူတော်ကောင်းသည် အားအလုံးအတွက် ဖြစ်သည်
၆။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ၏ ဘဝအောင်မြင်ရေး
၂။ အနုမောဒနာ (ဋ္ဌေးမြင့်မော်ကျော်မျက်)
၃။ အနုမောဒနာ (မတ္တရာမြို့ ကုသိုလ်ရှင်များ)
၄။ အပြစ်ခပ်သိမ်း လွတ်ငြိမ်းရေး
၅။ ကောင်းကျိုးဟူသမျှနှင့် အပ္ပမာဒ
၆။ သောတာပန်၏ ဘဝနှင့် အသိ
၇။ ဘုံဆွမ်းလောင်းလှူ စိတ်ထားဖြူ
၁။ အနုမောဒနာ (ဝင်း ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်း)
၂။ အနုမောဒနာ (မင်းသီဟ မုန့်မျိုးစုံ)
၃။ အနုမောဒနာ (မြိုင်မြန်မမာဘော်ဒီရုံ)
၄။ အလှူဒါန၏ စွမ်းဆောင်မှုများ
၅။ ရိုးသားဖြောင့်မှတ်ခြင်းသည် လူတို့၏ ဂုဏ်ရည်
၆။ ကောင်းမှုစွမ်းအားနှင့် လူကအရည်အချင်းများ
၁။ အနုမောဒနာ (ဦးနေအောင်)
၂။ အနုမောဒနာ (၇၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့)
၃။ အနုမောဒနာ (မဟာသန္တာအေးကျောင်းတိုက်)
၅။ သံဝေဂဝတ္ထုရှစ်ပါးနှင့် သံဝေဂ
၆။ စွမ်းအားကြီးမားသော သာသနာမျက်လုံးများ
၁။ အနုမောဒနာ (ညောင်ပင်ရွာ)
၂။ အနုမောဒနာ (ရဲမှုးကြီးသူရ ရန်ရှင်း)
၃။ အနုမောဒနာ (ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး)
၄။ အနုမောဒနာ (ဦးအံ့မောင်+ဒေါ်ချယ်ရီ)
၅။ အနုမောဒနာ (ဒေါ်တင်မုံ)
၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓဘာသနာနှင့် သမဏလေးမျိုး
၇။ စွမ်းအားကြီးမား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မျက်လုံးများ (၁)
၈။ စွမ်းအားကြီးမား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မျက်လုံးများ (၂)
၁။ အနုမောဒနာ (ဓမ္မသဟာယစင်တာ ၄နှစ်ပြည့်)
၂။ အနုမောဒနာ (မြိတ်မြို့ ကန်ဖျားရပ်)
၃။ အနုမောဒနာ (ဦးချစ်ထွေး+ဒေါ်ကြင်စိန်)
၄။ တပေါင်းလရာသီနှင့် ရှင်ကာဠုဒါယီ
၅။ တပေါင်းလရာသီ သဲပုံစေတီပွဲတော်
၆။ အများအတွက် သက်တော်ရှည်ခြင်း
၇။ ကျေးဇူးရှင်တို့အား ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း
၁။ မြင့်မြတ်သူတို့၏ သစ္စာတရား
၃။ ဘဝအတွင်းမှ အလင်းနှင့် အမှောင်များ
၄။ လွတ်မြောက်သည့် စိတ်ဓါတ်နှင့် အကျင့်မြတ်
၅။ ချမ်းသာသုခနှင့် ဘဝ အခွင့်အရေး
၁။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အမှီကောင်းများ
၂။ စည်းလုံးညီညာ ပြည်သာယာ (၁)
၃။ စည်းလုံးညီညာ ပြည်သာယာ (၂)
၄။ စည်းလုံးညီညာ ပြည်သာယာ (၃)
၅။ စစ်ကိုင်းသာသနာ (၂၆၀၀)
၁။ ရောဂါဖြစ်ပွားအကြောင်း ရှစ်ပါး (၂-၈-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၂။ အနုမောဒနာ (၆-၈-၂၀၁၅ မန္တလေး)
၃။ သြဝါဒ (၈-၈-၂၀၁၅ မန္တလေး)
၄။ ဤကမ္ဘာမှ အမြတ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေးဦး၏ ဘဝနိဂုံး (၁၀-၈-၂၀၁၅ မန္တလေးမြို့)
၅။ အရှုံးပေးသူသာ အနိုင်ရခြင်း (၁၃-၈-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၁။ အဘိရူပနန္ဒာ ကိုယ်တိုင်ပြောပြ သူ့ဘဝ သူ့အကြောင်း (၂၄-၈-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၂။ အမှန်တွေးမှ အမှန်မြင်သည် (၂၈-၈-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၃။သက်စွန့်ကြိုးစား အာဇာနည် ရဟန်းတော် တစ်ပါး (၂၉-၉-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် အနိမ့်ကြဆုံး လူတယောက်၏ ဘဝ (၁၃-၉-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၅။ အနုမောဒနာ (၁၈-၉-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၁။ မြဟ္မပြည်မှ သာသနာ
၂။ မြဟ္မနိမန္တနိကသုတ် အနှစ်ချုပ်
၃။ အနာဂါတ်၏ လူငယ်များ
၄။ မြတ်နိဗ္ဗာန်နှင့် သန္တိပက္ခလမ်းစဉ်
၅။ သြဝါဒ (၁-၆-၂၀၁၅)
၁။ သြဝါဒ (၅-၇-၂၀၁၅)
၂။ အကျဉ်းဆုံး ဝိပဿနာနှင့် အမြင့်ဆုံးအကျိုးတရား
၃။ ကုသိုလ်မြစ်ကြီး၍ စီးနေပါစေ
၄။ လူဘဝမှာ ကျေနပ်စရာများ
၅။ ဗုဒ္ဓနိယာမတရား အပါး (၃)
၁။ ရောဂါဖြစ်ပွား အကြောင်းရှစ်ပါး
၂။ အနုမောဒနာ (၆-၈-၂၀၁၅)
၃။ သြဝါဒ (၈-၈-၂၀၁၅)
၄။ ဤကမ္ဘာမှ အမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ၄ ဦး၏ ဘဝနိဂုံး
၅။ အရှုံးပေးသူသာ အနိုင်ရခြင်း
၁။ အဘိရှုပနန္ဒာ ကိုယ်တိုင်ပြောပြ သူ့ဘဝ သူ့အကြောင်း
၂။ အမှန်တွေးမှ အမှန်မြင်သည်
၃။ သက်စွန့်ကြိုးစား အာဇာနည် ရဟန်းတော်တစ်ပါး
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမနှင့် အနိမ့်ကြဆုံး လူတစ်ယောက်၏ ဘဝ
၅။ အနုမောဒနာ (၁၈-၉-၂၀၁၅)
၁။ အနုမောဒနာ (၁၉-၉-၂၀၁၅)
၂။ အနုမောဒနာ (၂၀-၉-၂၀၁၅)
၃။ ကံအကြောင်းတရားနှင့် ဆုတောင်းစကား(၂၀-၉-၂၀၁၅ မန္တလေး)
၄။ ထာဝရစင်ကြယ်ရေး(၂၁-၉-၂၀၁၅ မန္တလေး)
၅။ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ခြင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်၏ အရည်အချင်း (၂၃-၉-၂၀၁၅ မန္တလေး)
၁။ အနုမောဒနာ (၂၅-၉-၂၀၁၅)
၂။ ခရီးသွားရဟန်းများနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ သင်ကြားချက်များ (၁-၁၀-၂-၁၅ - မဟာအောင်မြေမြို့နယ်)
၃။ အနုမောဒနာ (၁-၂၀-၁၀၂၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၄။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး (၁) (၁၄-၁၀-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၅။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး (၂) (၁၅-၁၀-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၆။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး (၃) (၁၆-၁၀-၂၀၁၅ ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၁။ သုတကို မြတ်နိုးပါ
၂။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဘဝနှင့် ဝါဆိုလပြည့်နေ့ အမှတ်တရ
၃။ သြဝါဒ အနုမောဒနာ (၂၅-၁၂-၂၀၁၄)
၄။ ကျက်သရေရှိသော လူ့ဘဝ
၅။ အကြမ်းဖက်မှု မရှိသော မေတ္တာကမ္ဘာ
၁။ အနုမောဒနာ (၃၁-၃-၂၀၁၆)
၂။ သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ စွမ်းအား (၂၉-၂-၂၀၁၆ လှိုင်သာယာမြို့နယ်)
၃။ အနုမောဒနာ (၈-၄-၂၀၁၆)
၄။ အနုမောဒနာ (၁၀-၄-၂၀၁၆)
၅။ မူးယစ်ကင်းကွာ မင်္ဂလာ (၁၀-၄-၂၀၁၆ နောင်ချိုမြို့)
၆။ အလုပ်ပေး (ပြင်ဦးလွင်မြို့)
၇။ အနုမောမောဒနာ (၁၃-၄-၂၀၁၆)
၈။ အနုမောဒနာ (၂၆-၄-၂၀၁၆)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ အောင်ချမ်းသာရွာ
မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်း၊ တိုက်ခွဲ (၃)၊ ဓမ္မသဟာယ သာသနစင်တာ
၂၀၁၆ ခုနှစ် အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁)
၂၀၁၆ ခုနှစ် အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်းစာအုပ်
၁။ ၁-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ သြဝါဒ
၂။ ၁-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၃။ ၁-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၄။ ၂-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၅။ ၂-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၆။ ၃-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၇။ ၃-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၈။ ၄-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၉။ ၄-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၀။ ၅-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၁။ ၅-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၂။ ၆-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၃။ ၆-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၄။ ၇-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၅။ ၇-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၆။ ၈-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၇။ ၈-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၈။ ၉-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၉။ ၉-၈-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၁) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၂၀၁၆ ခုနှစ် အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂)
၂၀၁၆ ခုနှစ် အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်းစာအုပ်
၁။ ၄-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ သြဝါဒ
၂။ ၄-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၃။ ၄-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၄။ ၅-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၅။ ၅-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၆။ ၆-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၇။ ၆-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၈။ ၇-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၉။ ၇-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၀။ ၈-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၁။ ၈-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၂။ ၉-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၃။ ၉-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၄။ ၁၀-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၅။ ၁၀-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၆။ ၁၁-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၇။ ၁၁-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
၁၈။ ၁၂-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၈နာရီမှ ၉နာရီထိ
၁၉။ ၁၂-၉-၂၀၁၆ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) သင်တန်း၊ နံနက် ၉း၁၀နာရီမှ ၁၀း၁၀နာရီထိ
ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာများ
၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၁။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၁) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၂။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၂) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၃။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၃) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၄။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၄) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၅။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၅) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၆။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၆) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၇။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၇) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၈။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၈) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၉။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၉) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၁၀။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၁၀) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆
၁၁။ အဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် အပိုင်း (၂) ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်၏ ပြန်လည်ပို့ချချက် သင်ခန်းစာ (၁၁) ၄-၉-၂၀၁၆ မှ ၁၃-၉-၂၀၁၆